चलचित्रको गित मै आइसक्यो ई-सेवा, के हो त आखिर यो ई-सेवा? - Koshi Online
चलचित्रको गित मै आइसक्यो ई-सेवा, के हो त आखिर यो ई-सेवा?
भर्खरै सार्वजनिक भएको चलचित्र “दुई रुपियाँ” को “टल्कियो जवानी…” बोलको गीतमा एउटा लाइन हामीले सुन्न पाउँछौ, “व्यालेन्स सार्दिउला ई-सेवा मा”। आखिर के हो त यो ई-सेवा? धेरै दर्शक स्रोताको मनमा यो जिज्ञासा आउन सक्छ, त्यसैले आज हामी यसको विषयमा चर्चा गर्न गईरहेका छौ।
के हो ई-सेवा?
अनलाइन प्रयोगकर्ताहरुको लागि ई-सेवा एक सजिलो माध्यम हो जस मार्फत जो कोहि व्यक्तिले, जो कसैलाई चाहेको रकम छिट्टो पठाउन सक्दछ। पैसा पठाउने मात्र हैन ई-सेवा प्रयोग गरेर मोबाइलमा व्यालेन्स हाल्न, गाडीको टिकट काट्न, हवाई टिकट काट्न, बिजुलीको बिल तिर्न, सिनेमाको टिकेट काट्न, डिसहोम रिचार्ज गर्न, बिजुलीको बिल तथा खानेपानी को बिल तिर्न, इन्सुरेन्स तिर्न लगायत अन्य थुप्रै सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ। स्मरण रहोस ई-सेवासंग सहकार्य गरेका कुनै पनि कम्पनिहरुसंग सजिलै सेवा मार्फत भुक्तान गर्न सकिने भएकोले अहिले ई-सेवा नेपालमा ज्यादै लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ। ई-सेवाको मोबाइल एप प्रयोग गरेर यी सेवाहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपालका बिभिन्न बैंकहरुबाट सजिलै रकम ई-सेवामा ल्याउन र ई-सेवाबाट बैंकमा लैजान सकिन्छ।
कसरि बनाउने आफ्नो ई-सेवा?
तपाइले फेसबुक एकाउन्ट बनाए जसरि www.esewa.com.np मा गएर आफ्नो एकाउन्ट दर्ता गर्न सक्नु हुन्छ। बैंकमा जस्तै तपाइको ई-सेवा एकाउन्ट भेरिफाइ गर्नको लागि तपाइको व्यक्तिगत विवरण र नागरिकता उपलब्ध गराउन पर्नेहुन्छ। आफ्नो ई-सेवा आइडी र पासवर्डको सहयोगले अब तपाइले जुनसुकै समयमा ई-सेवाको सेवा लिन सक्नु हुनेछ।
ई-सेवामा पैसा कसरि हाल्ने?
यदि तपाईले कुनै पनि बैंकको अनलाइन बेङ्किङ्ग वा मोबाइल बेङ्किङ्ग सेवा लिनुभएको छ भने उक्त सुविधा प्रयोग गरि ई-सेवामा पैसा हाल्न सकिनेछ। ई-सेवाको ब्यानर भएको कुनै पनि स्टोरबाट तपाइले आफ्नो ई-सेवा एकाउन्टमा पैसा हाल्न सक्नुहुनेछ।
ई-सेवा आइडी भनेको के हो?
नयाँ ई-सेवा खाता खोल्दा प्रयोग गरिएको तपाइको मोबाइल नम्बर (भेरिफाइ गरिएको) वा इमेल एड्रेस (भेरिफाइ गरिएको) तपाइको ई-सेवा आइडी हो।
सेवा लिएको पैसा लाग्छ?
तपाईले आफ्नो ई-सेवा बाट अर्को ई-सेवा एकाउन्टमा पैसा पठाउदा निशुल्क छ, तर कुनै पनि सेवा लिदा जस्तै ई-सेवाबाट आफ्नो बैंकको खातामा पैसा सार्दा भने पैसा लाग्छ। यदि कुनै पनि रकम सार्दा रकम लाग्ने छ भने त्यो त्यहिँ देखिन्छ।
जान्नै पर्ने थप कुरा:
ई-सेवा चलाउन थालेपछि आफ्नो पासवर्डको सुरक्षाको जिम्मेवारी आफ्नै हुन्छ तसर्थ ई-सेवामा प्रयोग भएको मोबाइल नम्बर र इमेल आइडी र पासवर्ड अरुसंग नबाढ्नुहोस। ई-सेवाको प्रयोग गरिसकेपछि लग-आउट गर्न नभुल्नुहोस।
टेलिकमको डाटा सेवा प्रयोगकर्ता एक करोड पुगे
ह्वाट्सएपमा अब एप नखोली च्याट गर्न पाइने
फेसबुक जस्तै ट्वीटरले पनि प्रयोगकर्ताका डाटा बेचेको खुलासा
अब उडरहेको जहाजमा इन्टनरनेट
ट्विटरमा आयो आन्तरिक समस्या, पासवर्ड परिवर्तनको अपिल
अब फेसबुकमा हिस्ट्री डिलिट गर्ने सुविधा आउँदै, डेटिङ सेवा पनि आउँदै